Izolo, umyeni ka-Xenia Borodina uKurban Omarov wayenosuku lokuzalwa. Le yayiyiholide yokuqala yokuqala, leyo abafazi abayibonile emva kokuxolelana. Kwesinye seendawo zokutyela ezinkulu, abaninzi abahlobo babo badibana.
Kubonakala ukuba iholide yayiyimpumelelo. Ekunene kwivenkile yokudlela, uKurban Omarov uthumele iindaba zakamuva kwi-Instagram yakhe. Umgwebi wembhiyozo ebanjwe kwiifoto zakhe ezincinci kunye nabahlobo kunye nevidiyo yokuzonwabisa.
Ngozuko lomhla wokuzalwa, ikhekhe elingavamile lenziwe ngendlela "yempi":
Abahlobo bakaKurban Omarov bahleka ngomkhonto wakhe womtshato
Emva kwetafile, kunye noKurban Omarov, wayengumkakhe, u-Xenia Borodina. Ngexesha lomthendeleko, enye yeendwendwe ithatha ividiyo ye "intetho" yomntu oshishino okhumbuza abaninzi ababhalisile kwi-instagram yakhe yengxoxo yeGopnik:
I-Wai wai 10 kuhlaziywa kwaye ibuyele emva koko)))))) fuuuuu
... ilizwi lifana nomntu omdala, kodwa intetho enjengomntwana. Kubonakala kum lo shirpatrek ngokwakhe akayiqondi ukuba yi-slop, i-Gopnik ayiyazi ukuba i-gopnik.
Njengomgca wembhiyozo, umyeni ka-Xenia Borodina wayenelungelo lokugqithisa encinci ngotywala, kodwa ababhalisile be-Instagram Kurban Omarov babecinga ukuba umntu owenza ishishini uhlambalaza ku-Xenia. Inyaniso kukuba ngandlela-thile umhlobo waseKurban wambethe ngento enokumxabana nomfazi wakhe, ikhowudi yesibini yabasusa amathanga abo omtshato:
"Yaye yakho incwadana kwinyanga edlulileyo, bekuphi na?"
Akunakulungiswa kakuhle kwi-ring. Musa nje ukuhlonela uhlobo oluthile lweBorodina.
Kwabonakala ngathi uBroodin wamncoma ngokukhawuleza, wayengekho into ehlekisayo, uhlobo oluthile lokusongela
Ukugqithisa kwindandatho! Ulinen ecocekileyo igubha. Bahlala benelisekile.
UAlexei Panin waqalekisa uMaxim Galkin kumnyama, ividiyo
UKsenia Borodina utshintshe imithetho kwi-Instagram yakhe
U-Alsou wabuyisela emva kokuzalwa kwonyana wakhe, isithombe
Ngubani oza kunqoba ukhetho kwi-US 2016 - izibikezelo kunye nezibikezelo zeengqondo
UTimati noShishkova baphula ngonaphakade?
USvetlana Loboda wabangela umsindo wabalandeli baka-Olga Buzovy
Iimpazamo eziqhelekileyo ekwenzeni okukhulayo
"I-Nord" isaladi kunye ne-herring kunye ne-croutons
Indlela yokukrazula umkhuba obi - ukutshaya
Ubomvu obushushu nge ham neeshizi
Ubudlelwane bobudlelwane bomtshato ngexesha lomtshato
Ukunqatshwa kwabantu ngesondo: izizathu ezi-10
Iingcamango zezipho ezingabonakaliyo zokuqala
Isondlo sabasetyhini ngelixa besetyenziselwa ukuzivocavoca
Iingqayi zamangxube kunye ne-chocolate
Amanyathelo okuqala kunye nomntwana
Ukupheka okulula kunye neengcebiso malunga nendlela yokupheka izitato kwiiFrentshi